Cajiib: Diin 90 Jir ah oo Jiir laxaad tiray, ka dibna taayiro loogu bedelay |
Cajiib: Diin 90 Jir ah oo Jiir laxaad tiray, ka dibna taayiro loogu bedelay
Jiir ayaa labada lugood ee hore ka cunay diin 90 Jir ah, waxaana loo sameeyey laba taayir oo loogu bedelay labadii lugood ee hore, kaas oo uu diintu hadda ku socon karo si ka dhakhso badan sidii hore uu ugu socon jiray labadiisii lugood ee caadiga ahaa.
Diinkan oo lagu magacaabo Mrs. T oo laga leeyahay Pembrook oo ka tirsan Wales, qofka iska leh oo lagu magacaabo Jude Ryder, ayaa ka cabsi qabtay markii uu beelay labada lugood ee hore in uu kharash gareeyo 1000 Pound oo lacagta Uk ah si loogu daaweeyo. Balse waxa arrintaa horumar ka sameeyey kana badbaadiyey lacagtaa lagu daweyn lahaa Diinka wiilkeeda oo Injineer Makaanikada ku xeel dheer oo lagu magacaabo Dale oo 37 Jir ah.
Waxa uu sameeyey inuu xabag mariyo qolafta sare ee diinka, dabadeedna ku xidho laba taayir oo sida kuwa diyaaradaha oo kale ah, taas oo diinkii ka dhigtay inuu ka dheereeyo sidi uu markii hore ee caadiga ahaa ugu socon jiray lugihiisii.
Dale ayaa hadiyad ahaan loo siiyey Diinkan markii uu ahaa 8 sano jir, Diinkuna da’diisu waxay ahayd wakhtigaa 60 jir.
Cunitaanka Jiirkani cunay lugaha diinka ee hore ayaan ahayn wax caadi ah oo aan badanaa dhicin in jiir cuno lugaha diinka. Laakiin Diinkii u weynaa gudaha dalka UK oo ahaa 130 Jir Hal Qarni iyo 30 sano laguna magacaabi jiray Thomas wuxuu u dhintay qaniinyo Jiir sanadkii 2013.